Ekamelweni liyindawo sichitha isikhathi esiningi sethu, nokho futhi ivame ukuba kube ukunganakwa impela uma kuziwa ubuciko. Namuhla, imali kungase kube yisici esibalulekile! Nanka amanye amasu ezinkulu kukhanya up isikhala sakho kungabikho mali nhlobo!
1.Hlela kabusha! A lungiselelo elisha fresh njalo kwenza igumbi uzizwe entsha. Ungesabi ukuzama engele entsha ifenisha yakho beka umbhede wakho idayagonali, noma ngisho nendawo egumbini!
2. Ukucinga kufanale agqoke izikhindi zangaphansi yakho for scarves, zokudla kuhlanzekile yini, noma ngisho pillowcases ukuthi uncoma isikimu sakho sombala.
Ungasebenzisa izinto osuvele ukuthambisa top umbophi noma emaphethelweni nightstand yakho, noma mhlawumbe walala itshali pretty phezu unyawo embhedeni. Uma usuvele unayo aphonse pillows laphezu kombheda wakho (uma ungaphenduki, sekuyisikhathi ukweba nabo kusuka kwelinye ikamelo!) ungase futhi bopha laba izindwangu emhlabeni pillows for a look entsha, futhi nje ukuphepha pin it emhlane.
3. Engeza plant iya ekamelweni lakho. Qalaza indlu yakho ukuze ubone uma omunye izitshalo zakho ekhona babeyojabula kakhudlwana phakathi kwekamelo lakho lokulala, bese ukuhambisa it kukhona! Uma ungakwazi ukuthola isitshalo isilungele ukuthutha, enze elilodwa! Izitshalo Abaningi zingatshalwa cuttings, noma ekhona wakho houseplants, omunye umngane angase akuvumele uthathe, noma ngisho ezinye izitshalo ongaphandle.
Ivy futhi abaningi umthunzi groundcovers kukhona houseplants ezinhle kakhulu. Ungakwazi Bakhumbule ngisho ebuntwaneni yakho kancane futhi ukhule amazambane Imi, uphayinaphu, noma isanqante eziqongweni ingcosana! Ngoba iziqukathi, bheka ku ikhishi lakho amakhabethe.
teapots Old and izinkomishi, nezitsha ingilazi, ngisho izitsha baking kungakwenza iziqukathi esiyingqayizivele.
4. Engeza nezinto zenkolo ekamelweni lakho. I gcina isithombe somuntu ngamunye izingane zami uma sisebancane eduze kombhede wami, futhi njalo ngimomotheke. How about ulenga yakho umgubuzelo wedding kusukela headboard, noma zokweseka wakho isimemo wedding noma izinhlamvu uthando ubudala?
5.Engeza ngephunga. Uma ungenalo yimuphi Potpourri noma impepho endlini, ukusika ezinye peels orange futhi uvumele ome, ke mix with whatever athaphukayo onayo ekhabetheni lakho. (Kuthatha ingcosana, zama nesinamoni, ginger, noma allspice.) Beka Potpourri yakho endishini evulekile ekamelweni lakho iqalele futhi ugqozi!
Kamuva ehlobo, qinisekisa ukuthi zihlanganisa izimbali ekamelweni lakho, uma ungenawo roses noma ezinye izimbali olunephunga elimnandi egcekeni lakho, daisy ngaseceleni komgwaqo kungaba ukuhogela enkulu kakhulu!
Just a izinguquko ezincane ezimbalwa, akukho mali abathintekayo, kanye kangcono, indawo emihle ngawe siqala futhi siphele usuku ngalunye!
Yini ongayifunda ngokungeza Ikhaya Interior Summer Colors
77034	45 Bedroom, Business, flower, enza isikhewu soqalobhalo;, unesitshalo, Plant, Shopping, umcamelo Phonsa
← Ukuphuza Coffee Ayikwazanga Yehlisa Suicide Risk! Wolves’ Howls Can Be ID'd ikhompyutha →